Akwụkwọ Jeremy Levy na Martech Zone
Edemede site na Jeremy Levy
Jeremy Levy kwadoro Na-egosi ya na onye ọsụ ụzọ na onye na-elekọta mmadụ mgbasa ozi bụ Andrew Weinrich mgbe ọ chọtara mkpa maka data ndị ahịa dị mma mgbe ha na-agba ọsọ MeetMoi, ngwa mkpakọrịta nwoke na nwanyị dabeere na ọnọdụ ha rere na Match.com. Ndị duo ahụ malitekwara Xtify, ihe ngosi ngosi mkpanaka ha rere IBM.
Ma ị na-ekwu Rollercoaster Tycoon ma ọ bụ Dropbox, onyinye freemium na-anọgide na-abụ ụzọ nkịtị iji dọta ndị ọrụ ọhụrụ na ngwaahịa na ngwa ahịa sọftụwia. Ozugbo ha banyere n'elu ikpo okwu a na-akwụghị ụgwọ, ụfọdụ ndị ọrụ ga-emecha gbanwee gaa na atụmatụ akwụ ụgwọ, ebe ọtụtụ ndị ọzọ ga-anọ n'ọkwa n'efu, ọdịnaya ọdịnaya ọ bụla ha nwere ike ịnweta. Nnyocha banyere isiokwu nke mgbanwe freemium na njigide ndị ahịa hiri nne, a na-agbakwa ụlọ ọrụ ume ka ha mekwuo mmụba
Egosi: Nchịkọta Ndị Ahịa Na Nghọta Na-arụ Ọrụ
Nnukwu data abụghịzi ihe ọhụrụ na ụwa azụmahịa. Imirikiti ụlọ ọrụ na-eche banyere onwe ha dị ka data-chụpụrụ; ndị isi teknụzụ guzobere akụrụngwa nchịkọta data, ndị nyocha nyochachara data ahụ, ndị ahịa na ndị njikwa ngwaahịa na-anwa ịmụ ihe na data ahụ. N'agbanyeghị na ịnakọta na nhazi data karịa mgbe ọ bụla, ụlọ ọrụ na-efu ihe bara uru banyere ngwaahịa ha na ndị ahịa ha n'ihi na ha anaghị eji ngwaọrụ kwesịrị ekwesị iji soro ndị ọrụ n'ofe njem ndị ahịa niile.